शैक्षिक सुधारका लागि बृहत् राष्ट्रिय महाअभियान
२०७४ पौष २० बिहिबार, काठमाडाै‌ं । नेपालकाे शैक्षिक सुधारका लागि बृहत् राष्ट्रिय शिक्षा अभियान सुरु हुने भएको छ । शिक्षा अभियन्ता अभिषेक घिमिरेको नेतृत्वमा बृहत् राष्ट्रिय शिक्षा अभियान सुरु हुन लागेकाे हाे । ... बाँकी अंश»
एउटै कोठामा चार वटा कक्षा ?
२०७४ पौष २० बिहिबार, काठमाडौँ । बूढानीलकण्ठस्थित वेद विद्याश्रममा कक्षा कोठा अभावका कारण पढाइमा समस्या भएको छ । ... बाँकी अंश»
सबै विद्यालय बुधबारदेखि बन्द गरिने
२०७४ पौष १९ बुधबार, जनकपुरधाम । प्रतिकूल मौसमका कारण धनुषा जिल्लाका सामुदायिक विद्यालय बुधबारदेखि बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ । ... बाँकी अंश»
स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र : विद्यालय व्यवस्थापन समिति पुनःगठनसम्म
२०७४ पौष १० सोमबार, काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार संविधानतः स्थानीय सरकारमा भएकाले सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिको गठन–पुनःगठन उसकै कार्यक्षेत्रमा पर्ने भएको छ । ... बाँकी अंश»
शिक्षक महासंघद्धारा विद्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धमा बनेको कार्यविधि प्रति ध्यानाकार्षण
२०७४ पौष १० सोमबार, काठमाडौं। नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले स्थानीय तहको क्षेत्र–विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा आफ्ना नयाँ दृष्टिकोणहरु सार्वजनिक गरेको छ। महासंघले पत्रकार सम्मेलन गरेर स्थानीय तहको शिक्षा सञ्चालन र नियमनका सम्बन्धमा बनेको कार्यविधि–२०७४ को बारेमा ध्यानाकर्षण जनाउँदै आफ्ना धारणाहरु आज सार्वजनिक गरेको हो। ... बाँकी अंश»
हिरक जयन्तीलाई लक्षित गरि जनजागृतिले जुटायो ६० लाख आर्थिक सहयोग
२०७४ पौष ६ बिहिबार, गुल्मी,बाग्लुङ्ग । बाग्लुङ्गको एक विद्यालयको लागि स्वदेश तथा विदेशका विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाबाट झण्डै ६० लाख भन्दा बढि आर्थिक सहयोग संकलन भएको छ । ... बाँकी अंश»
शान्ति शिक्षा अभियानले दियो १६ लाखको फर्निचर
२०७४ पौष ६ बिहिबार, काठमाडौं । शान्ति शिक्षा अभियान नेपालले भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गरिएका विद्यालयलाई फर्निचर उपलब्ध गराएको छ । ... बाँकी अंश»
२०७४ पौष ५ बुधबार, भक्तपुर । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले २०७४ सालको एसइई परीक्षा आगामी चैत ८ देखि सञ्चालन गर्ने भएको छ । परीक्षा सञ्चालन समितिको आज बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको परीक्षा नियन्त्रक अम्बिकाप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । ... बाँकी अंश»
तालाबन्दीमा डडेल्धुरा बहुमुखि क्याम्पस : भित्र कर्मचारी र बाहिर स्ववियुको ताला
२०७४ पौष ३ सोमबार, डडेल्धुरा । सुदूरपश्चिमको केन्द्र मानिने डडेल्धुरा जिल्लाको एक मात्र सरकारी बहुमुखि क्याम्पसमा तालाबन्दी भएको छ । अस्थायी कर्मचारीलाई नविकरण गर्नु पर्ने माग राख्दै ९७ दिन अगाडी क्याम्पसको प्रशासन तथा परिक्षा शाखा र क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमा कर्मचारीले तालाबन्दी गरेका छन भने त्यसको समाधान गर्न दबाब दिने उद्देश्यले सोमवार क्याम्पसको प्रबेश द्वारमा स्वबियुले तालाबन्दी गरेका छन । ... बाँकी अंश»
स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी गएनन्
२०७४ पौष २ आइतबार, बैतडी । जिल्लाका स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी नहुँदा शिक्षा कार्यक्रम प्रभावित भएको छ । जिल्लाका पाँचवटा स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी खटाइए पनि ती ठाउँमा अझै कर्मचारी गएका छैनन् । ... बाँकी अंश»
प्रश्नपत्र बाहिरिएको भन्दै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा तोडफोड
२०७४ मङ्सिर २८ बिहिबार, विराटनगर । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको मोरङ गोठगाउँमा रहेको कार्यालयमा बिहिवार विद्यार्थीले तोडफोड गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
सिन्धुलीमा विद्यालयको सिलान्यास
२०७४ मङ्सिर ५ मंगलबार, सिन्धुली । घाँसी आदर्श समाज नेपाल “घाँसी नेपाल”२०७२ साल बैशाख १२ र २९ को भुकम्पबाट प्रभावित भएका विद्यालय भवनहरुको पुननिर्माण कार्यलाई अभियानकै रुपमा अगाडि सारेको छ । ... बाँकी अंश»
शिक्षा नीति परिमार्जन गर्नुपर्छ : श्रेष्ठ
२०७४ मङ्सिर २ शनिबार, स्याङ्जा । नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले पुरानो शिक्षा नीति परिमार्जन गरेर युग अनुसारको शिक्षा नीति बनाउनु पर्ने बताएका छन् । स्याङ्जाको गल्याङ्मा चुनावी सभालाई सम्वोधन गर्दै स्याङ्जा क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधि सभाका उमेदवार समेत रहेका श्रेष्ठले जिवन उपयोगी शिक्षा नीति नहुँदा बेरोजगार समस्या बढेको बताएका हुन् । ... बाँकी अंश»
सल्यानका स्कुलमा तास लिएर जाने शिक्षकको यस्तो छ कुरो खास
२०७४ कार्तिक २९ बुधबार, सल्यान। शिक्षकहरु तास लगेर स्कुल जान्छन् भन्दा तपाइलाइ अचम्म लाग्न सक्छ । तर अचम्म मान्नु पर्दैन । सल्यान जिल्लामा शिक्षकहरु तास लगेर स्कुल जान्छन् अनी विद्यार्थी संगै खेल्छन् पनि । जिल्लाको दार्मा गाउँपालिका र कुमाखमालिका गाउँपालिकाका विद्यालयमा शिक्षकहरु तासका पत्ता बोकेर स्कुल जाने गरेका हुन् । यद्यपि उनीहरुले तासलाइ शैक्षिक सामग्रीको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
नेपाल ईन्जिनियरिंग कलेज चाँगुनारायणका अध्यक्षको मनपरी, विद्यार्थी संगठनलाई बाँड्न वार्षिक डेढ करोड
२०७४ कार्तिक २७ सोमबार, काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेले गरेको मनपरीतन्त्रको नयाँ प्रमाण फेला परेको छ । अध्यक्षसहित सञ्चालक रामरत्न उपाध्याय, लवराज भट्टराई र उपेन्द्र गौतम गरी चार जनाले विद्यार्थी तथा कलेजलाई गरेको विश्वासघात र गद्दारीको नयाँ प्रमाण फेला परेको हो । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको सञ्चालक समितिको आकस्मिक विशेष बैठक भनेर सात वटा गुप्त निर्णय भएको थाहा भएको हो । यी निर्णयहरु अन्य सञ्चालकहरुबाट आजका दिनसम्म पनि लुकाइएका छन् । ... बाँकी अंश»
२०७४ कार्तिक २७ सोमबार, रानीपौवा (नुवाकोट) । नुवाकोटको बेलकोटमा रहको एक माध्यमिक विद्यालयलाई १० थान कम्युटर हस्तान्तरण गरिएको छ । ... बाँकी अंश»
पनौतीकै नमुना विद्यालय तर दिउँसै बत्ती बालेर पढाउनुपर्छ
२०७४ कार्तिक २३ बिहिबार, काभ्रे । हेर्दा पुरानो शैलीमा बनाइएको एक शताब्दी पुरानो एक विद्यालयमा जोसुकै पर्यटक होस् या नेपाली सबैको ध्यान आकर्षित हुने गर्छ । ... बाँकी अंश»
हरुवाचरुवा बालबालिकालाई छात्रवृत्ति वितरण
२०७४ कार्तिक २१ मंगलबार, लहान । हरुवाचरुवाका बालबालिकालाई सिरहाको लहान नगरपालिकामा सोमबार छात्रवृत्ति वितरण गरिएको छ । ... बाँकी अंश»
सरकारी विद्यालयको खस्कँदो शैक्षिक नतिजा, निजी विद्यालयको महँगो शिक्षा प्रणाली अहिलेको चुनौती:उपराष्ट्रपति
२०७४ कार्तिक १७ शुक्रबार, रत्ननगर । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले सरकारी विद्यालयको खस्कँदो शैक्षिक नतिजा र निजी विद्यालयको महँगो शिक्षा प्रणाली अहिलेको चुनौतीका रुपमा रहेकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ... बाँकी अंश»
पीयूको प्रवेश परीक्षाको मेरिट लिष्ट विवादमा, स्थगित गर्न नेविसंघको माग
२०७४ कार्तिक १६ बिहिबार, काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय समन्वय समितिले शैक्षिक सत्र ०७४÷७५ मा इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि विश्वविद्यालयले लिएको प्रवेश परीक्षाको मेरिट लिष्ट ... बाँकी अंश»